Home Uncategorized Gudoonka Golaha Shacabka oo la kulmay xubno ka socda wakiilada beesha Caalamka
Gudoonka Golaha Shacabka oo la kulmay xubno ka socda wakiilada beesha Caalamka
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ay weheliso Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka marwo Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar ayaa waxay kulan muhiim ah la qaateen danjiraha dalka Taliyaaniga Amb. Alberto Vecchi.
Danjiraha ayaa xusay kaalinta ay ku lee dahay Dowladda Talyaaniga mashaariicda horumarineed ee wadamada EU-da ka fuliyaan dalka, ahmiyad gaar ahna siin doonaan wada shaqaynta golaha sharci dejinta sidoo kale waxaa uu soo hadal qaaday in dowladda Taliyaaniga ay soo dhoweyneyso gabdhii ugu horeysay oo noqata Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad.
Guddoomiyaha ayaa ammaanay doorka horumarineed ee lama ilaawaanka ah ay ku leeyihiin dowladda Taliyaaniga Dowlad dhiska dalka in uu yahay mid soo jireen ah oo Taariikh facweyn ku leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Previous articleMadaxweyne Xasan oo Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Yurub kala hadlay soo celinta taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya.
Next articleKulan looga hadlaayay abaaraha oo Muqdisho ka dhacay
Mareykanka oo beeniyay inay aqoonsi Caalami ah u raadinayaan Somaliland
Man City oo loo diray digniin kulul ee ku aadan raacdada ay ugu jirto saxiixa Bernardo Silva